Mahila Swasthya आमा र शिशुको स्वास्थ्यका लागि जन्मान्तर कति उपयुक्त ?
आमा र शिशुको स्वास्थ्यका लागि जन्मान्तर कति उपयुक्त ?
सोमबार, वैशाख २०, २०७८ महिला स्वास्थ्य
काठमाडौं - कोहि दम्पति एक सन्तान भए पुग्छ भन्ने सोच्छन् भने कोहि दुइवटा चाहिन्छ वा दुई भन्दा बढि चाहिन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । दुई वा दुईभन्दा बढि सन्तानको चाह गर्ने अभिभाबकले जन्म अन्तरातरमा खासै ध्यान दिइएको पाइदैन ।
कोहि महिलाले १ बर्षको अन्तरालमा २ सन्तान जन्माउँछन् भने कोहिले ५ देखि १० बर्षको अन्तरालमा पनि दोस्रो सन्तान जन्माएका उदाहारण हाम्रो समाजमा प्रशस्त छन् ।
वास्तवमा पहिलो र दोस्रो सन्तानको जन्म अन्तराल कति हुनुपर्छ भन्नेबारे अमेरिकी सहयोग नियोगले विभिन्न देशहरूमा गर्भान्तर र यसबाट आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्यमा पर्ने असरहरूबारे धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन्। यी अध्ययनहरूबाट निस्केको नतिजाहरूलाई आधार मानेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले यससँग सम्बन्धित विज्ञहरूलाई छलफल एवं विश्लेषण गराउँदा ती विशेषज्ञहरूले निम्न २ कुराहरूमा जन्मान्तरका लागि उपयुक्त समयबारे सल्लाह दिएका छन् ।
जिवित बच्चा जन्मे पछि पूनः अर्को पटक गर्भवती हुनको लागि उपयुक्त समयः
महिलाले जिवित बच्चा पाइसकेपछि अर्को बच्चालाई जन्म दिनका लागि कम्तिमा २४ महिना पर्खनु पर्दछ । कम्तिमा २४ महिनाको फरकमा गर्भवती भए आमा र शिशु दुबैको स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ ।
गर्भपतनपछि पुन गर्भवती हुनको लागि उपयुक्त समयः
आफै वा गराइएको गर्भपतनपछि महिला पूनः गर्भवती हुन कम्तिमा ६ महिना पर्खनु उपयुक्त हुन्छ ।
पहिलो बच्चा पाउने उपयुक्त समय
विभिन्न अध्ययनहरूबाट देखाएको नतिजा अनुसार बच्चा जन्माउनका महिला १८ वर्ष पुगेको र शारिरिक एवं मानसिकरुपमा स्वस्थ्य हुनु पर्छ । तर नेपालमा २० वर्ष पुगेपछि मात्र पहिलो बच्चा जन्माउन उपयुक्त मानिन्छ । त्यसै गरी ३५ वर्ष नाघिसकेपछि पनि आमा बन्नका लागि उपयुक्त मानिदैन ।
जन्मान्तर गर्दा नव शिशुमा हुने फाइदाः
स्वस्थ्य र बलियो नव शिशुको जन्मने संभावना बढी हुन्छ ।
नव शिशुले लामो अवधिसम्म स्तनपान गर्न पाउँछ ।
शिशुको पोषण अवस्था राम्रो भएर स्वस्थ्य हुन्छ ।
स्तनपानले आमा र बच्चा बीचको सम्बन्ध प्रगाट बनाउँदै लैजान्छ ।
जन्मान्तरमा बच्चा जन्माउदा पहिलो बच्चाले राम्रोसंग स्याहार गर्ने मौका पाउँछ ।
जन्मान्तर हँदा आमालाई पुग्ने फाइदाः
मातृ मुत्यु हुने संभावना कम गराउँछ ।
गर्भावस्थाको कारणले हुने रुग्णता कमी गराउँछ ।
पोषण र स्वास्थ्यमा सुधार गराउँछ ।
लामो अवधि सम्म स्तनपान गराउने मौका पाउँछ ।
यसबाट स्तन र ओभरीको क्यान्सर हुने सम्भावनामा कमी आउँछ ।
अनिश्चित गर्भधारण हुनबाट बचाउँछ ।
असुरक्षित गर्भपतन गर्नपर्ने अवस्था आउन दिदैन ।
शारिरिक, मानसिक र आर्थिकरुपमा आउँने समस्यालाई कम गराउँछ ।
निषेधाज्ञामा यसरी गरौं मानसिक स्वास्थ्यको हेरचाह
जानीराख्दा राम्रो, कब्जियत भएकाहरूले के गर्ने ? के नगर्ने ?
चिसो मौसममा गर्भवतीले यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ
पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने कारण र रोकथामका उपाय
उपत्यकामा थपिए ३ हजार ३४९ कोरोना संक्रमित १९ मिनेट पहिले